saw wai: February 2008
ဂျာနယ်ပြန်ထွက်သော်လည်း ဂျာနယ်ပါကဗျာရှင် ထောင်ထဲမှာ
DVB နော်စေးဖော ၂၁-၂-၂၀၀၈
အချစ်ကဗျာတပုဒ်ကြောင့် အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ကဗျာဆရာစောဝေဟာ စာပေစိစစ်ရေးက ပယ်ပြီးသား သူ့ကဗျာကို အချစ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်က သူတာဝန်ယူတယ်ဆိုပြီး ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုနဲ့ မနေ့ကတွေ့ဆုံစဉ် ပြောလိုက်ပါတယ်။ အချစ်ဂျာနယ်ပါ အချစ်ကဗျာတပုဒ်ကြောင့် အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ကိုစောဝေ ကို မိသားစုက မနေ့က ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။
ကိုစောဝေရဲ့ ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ် 'ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး' ကဗျာထိပ်ဆုံး စာလုံးတွေဟာ “အာနာ (ဏာ) ရူးကြီး၊ မှူးကြီးသန်းရွှေ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက အရင်လ ၂၂ ရက်ကတည်းက ကိုစောဝေကို ထိန်းသိမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကဗျာကို စာပေစိစစ်ရေးက ပယ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဦးမြတ်ခိုင်က သူတာဝန်ယူတယ်ဆိုပြီး အချစ်ဂျာနယ်မှာ ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ကိုစောဝေက အင်းစိန်ထောင်မှာတွေ့ရစဉ် ပြောပြလိုက် တယ်လို့ သူ့ဇနီးမနန်းစန်းစန်းအေးက ပြောပြပါတယ်။
"စိစစ်ရေးကနေပယ်ထားတဲ့ကဗျာပေါ့။ ပယ်ထားတဲ့ကဗျာကို အယ်ဒီတာအနေနဲ့ သူ့ရဲ့စာစောင် ရောင်းကောင်းရေး၊ ပေါက်ရေးပေါ့ တာဝန်ယူပြီးတော့ ထည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ ထည့်လိုက်တယ်။ စိစစ်ရေးမှာ အဲဒီကဗျာက ပိတ်ထားတယ်ပေါ့။ ကြက်ခြေခတ်ထားတယ်။ ဖော်ပြလို့မရဘူးပေါ့လေ။"
"ပယ်ထားတဲ့ကဗျာကို ဘှာေုကာင့်ဂျာနယ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပယ်ထားပေမယ့် သူတာဝန်ယူဏပီးတော့ ထည့်မယ်ဆိုဏပီးတော့ အဲဒီဟာကို ထည့်လိုက်တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ပယ်တာကို ပယ်တဲ့အတိုင်း ထားရင်တော့ ကိုစောဝေ ဒီလိုဒုက္ခမရောက်ဘူး။ ပယ်တာကိုမှ ကောက်ထည့်ထားတော့ ကိုစောဝေလည်း ဒီမှာဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူလည်းတော်တော် ခေါင်းကြိမ်းမှာပဲ။"
ဒီကိစ္စကို အထက်အာဏာပိုင်တွေသိရှိနိုင်ဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို စာတင်ဖို့ စီစဉ်နေ တယ်လို့ နန်းစန်းစန်းအေး ပြောပါတယ်။
"သူအထဲထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ အစ်မလည်း အများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်။ စီးပွားရေး ကတဖက်၊ သူ့ကိုတွေ့ဖို့ကတဖက်၊ စိတ်သောကတွေက အများကြီးရောက်တော့ အထက်လူကြီးတွေလည်းသိအောင်ပေါ့ ဒီကိစ္စကို။ နဂိုတည်းကိုက စာတင်ချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ သူကလည်း အဲလို အထက်ကလူကြီး သိအောင်ဆိုပြီးတော့ စာတင်ပါလို့ သူက အစ်မကိုပြောတယ်။ အစ်မရေးတတ်သလိုရေးပြီးတော့ တင်လိုက်မယ်ပေါ့။"
ဒီကဗျာကို အယ်ဒီတာက ဘာကြောင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြသလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူးလို့ နန်းစန်းစန်းအေးက ပြောပါတယ်။
"သူ့စိတ်ကိုလည်း အစ်မ မသိနိုင်ဘူးလေ။ သူ စေတနာနဲ့ထည့်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ သူထည့်စေချင်လို့ ထည့်တယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ "
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက ဦးမြတ်ခိုင်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတယ်။
"စာနယ်ဇင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုမြတ်ခိုင်ဟာ သက် သက်မဲ့ ဒါကို တကယ်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကို ချောက်တွန်းပြီးတော့ ထောင်မကျ ကျအောင် ဆင်လိုက် တဲ့ကိစ္စပေါ့။ သူနဲ့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်တယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရမှာပေါ့။ "
အာဏာပိုင်တွေက ကိုစောဝေကို အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပေမယ့် အချစ်ဂျာနယ်ကိုတော့ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုလိုက်လို့ ဒီအပတ် တနင်္လာနေ့မှာ နန္ဒာလှိုင်၊ လူမင်းတို့ပါဝင်တဲ့ 'ဓမမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ' ရုပ်ရှင်ပိုစတာမျက်နှာဖုံးနဲ့ ထုတ်ဝေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး ကဗျာကို စိစစ်ရေးက ပယ်ပါလျက် ဘာကြောင့် ဂျာနယ်မှာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကို မေးမြန်းရာမှာ ဦးမြတ်ခိုင်က 'ကိုစောဝေက စာမူပေးလို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြတယ်' လို့သာ ဖြေကြားပါတယ်။
"အမှန်က ဒါ စောဝေ ပေးတယ်။ ကျနော်တို့ ဖော်ပြတာ။ ဒါပဲလေ။ ဒါအဖြစ်မှန်ပဲ။ အားလုံးသိ ပြီးသားပဲ။ တလောကလုံးသိတယ်။ စောဝေ ကျနော်တို့ကိုပေးတယ်။ ကျနော်တို့ဖော်ပြတယ်။ ဒါပဲ"
Posted by zarny win at 2:58 AM0comments
စောဝေ - အမေ
ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ တခါက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုမှတ်တမ်း
Posted by zarny win at 12:56 AM0comments
a small book of poems celebrating Saw Wai’s special valentine
စောဝေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်လာပါပြီ။
ကိုစောဝေရေးဖွဲ့ခဲ့သလိုပဲ ကဗျာဆရာ ၁၂ ယောက်က အာဏာရူးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဆိုတဲ့ ၀ါကျကို ကဗျာတွေထဲမှာ ၀ှက်ပြီး ဖွဲ့ဆိုထားပါတယ်။
စာမျက်နှာ ၂၀ ပါတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကို ဟောဒီမှာ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပါ။
An American poet named A. J. Patrick Liszkiewicz heard this news and has put together with twelve contributorsasmall book of poems celebrating Saw Wai’s special valentine. The book is available here (PDF) and is of course called “Power Crazy Senior General Than Shwe.” All of the poems in it play with those words, some mimicking in English Wai’s first-word strategy, others doing more cryptic exercises, working the phrase in forward and backward and at angles. You could waste hours at the office or on the train or in bumper-to-bumper unraveling these gems.
Posted by zarny win at 5:56 PM0comments
Labels: data, poem
Posted by zarny win at 5:49 PM0comments
အိုင်းရစ်ကဗျာဆရာကြီး ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို ဆန္ဒပြမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကဗျာဆရာစောဝေကို အကျဉ်းချထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ - - ( အပြည့်အစုံဖတ်ရန် )
Posted by zarny win at 5:39 PM0comments
ဇန်န၀ါရီ (၂၁)ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေး ကဗျာကို အားကျသဖြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးဖွဲ့လိုက်ပါသည်။ ဆိုပြီး ညိုကြီးရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဂုဏ်ပြုကဗျာတစ်ပုဒ် ဖတ်ရပြန်ပါတယ်။
Posted by zarny win at 6:01 AM0comments
အောက်မှာဖတ်ရမယ့် ကဗျာနဲ့ မှတ်ချက်ကို A,Ngwei ဘလော့ဂ် ကနေ ယူတယ်။ အငွေ့ တဲ့။ ကလောင်နာမည်က။ အငွေ့ ရေးတဲ့ကဗျာ။ စောဝေကဗျာမဟုတ်။ သို့ပေမဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါဦး၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ရက်စွဲနဲ့ တင်ထားတာ။
မနေ့တနေ့က အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကဗျာဆရာ စောဝေရဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံးရေး ဟန်နဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။မိတ်ဆွေများ အဓိပ္ပယ်ပေါက်ကြမယ်လို့လည်းထင် ပါတယ်။
Posted by zarny win at 5:23 AM 1 comments
ဒေါက်တာလွန်းဆွေဘလော့ဂ်မှာ တွေ့တဲ့ကဗျာ။ Jan6ရက်စွဲနဲ့ တင်ထားတာ။ စောဝေရဲ့ ကဗျာ တဲ့။ "ထားခဲ့" ။
Posted by zarny win at 5:20 AM0comments
Posted by zarny win at 6:47 AM0comments